Baatiiwwan Gannaa maalif hawwataa ta’u? – Fana Broadcasting Corporate
Finfinnee, Adoolessa 3, 2011 (FBC) -Namoonni haalli qilleensaa diilallaa’aa isaan mijatu, ji’oottan Gannaa baay’isanii hawwu.
Akkuma kana rooba, balaqqeessaa fi bakakkaa kan sodaatan fi qilleensi dillallaa’aa namoonni isaan hin-mijanne ammoo ji’oonni Gannaa osoo jiraachuu baatanii jedhanii gaafatu, dhumu gannichaa hawwiidhaan eeggatu.
Ta’us Ganni bareedinaa fi mi’aa mataa isaa qaba.
Ganni yeroo dhufu carraan manaa ba’uu keenyaa waan hir’isuuf yeroo ofii keenyaa akka dabarsinu carraa kenna.
Kana malees, ganni faayidaa fayyaa hedduu akka qabu qorattoonni nihimu.
Akka fakkeenyaatti Ganni wayita dhufutti fayyaaf faayidaalee asiin gaditti tarreeffaman argamuu danda’a.
1. Nyaati fayyaaf tolu akka jiraatu gargaara
Wayita Gannaa qilleensi diilallaa’aa waan jiraatuuf nyaatni akka hin-alaane gargaara.
Wayita Bonaa garuu ho’i olaanaa waan jiraatuuf nyaatni carraa alaa’uu waan isa qaqqabuuf sirna nyaataa jeeqa.
2. Sochii qaamaatiif haala mijataa uuma
Namoonni ji’oota Bonaatti yeroo baay’ee sochii ga’umsa qaamaa mana keessatti hojjataman ‘Jiminaaziyamoota’ filachuuf dirqamu.
Haalli qilleensaa Gannaa garuu diilallaa’aa fi qillleensa qulqulluu kan qabu waan ta’eef mana keessaa alatti daandilee yookiin dirree irratti deemsa miillaa, sochii qaama hoo’isuu fi sochii ga’umsa qaamaa kaan taasisuuf carraa uuma.
Sababa kanaanis Ganna sochii ga’umsa qaamaa gahaa taasisuu waan danda’amuuf kaaloorii hamma darbe qaama keessatti argamu hir’isuu dandeessisa.
3. Dhiphina hir’isuun gammachuu dabala
Wayita Gannaa boqonnaa fudhatanii lalisaa biqilootaa fi qilleensa qulqulluun of bashannansiisuun dhiphina hir’isuuf gargaara.
Ganni namoonni yaada gaarii ta’e akka cimsatan akka taasisus qorattoonni himaniiru.
4. Ilbiisonni jarmoota dhibee fidan baatan hin-uummamani
Ganni haala qilleensaa diilallaa’aa fi bishaan gahaa rooba irraa argamu waan qabaatuuf ilbiisota ji’a bonaatti uumaman Anaafilasii fi kan akka titiisaa niballeessa.
Kanaanis dhibeewwan nama ajjeesuu danda’an ilbiisotaan dhufan irraa akka fagaannu gargaara.
5. Gubaa buusaa qaamaa ni hir’isa
Namoonni yeroo baay’ee miidhaan qaamaa wayita isaan mudatu cabbii itti qabuun dhukkubbiisaa hir’isuuf yaalu.
Haalli qilleensaa ji’a Gannaa garuu gubaa buusaa qaamaa qabnu akka hir’atu gochuun dhukkubbii irraa akka nu furu qorannoowwan hedduu eeraniiru.